Myanmar Online Games Forum :: MMOG Entertainment :: Comedy Share |
Subject: စာလုံးပေါင်းမှားတဲ့ည Sun 26 Jun 2011, 5:36 pm
ရန်ကုန်မှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့ ကိုလုံးတစ်ယောက် ... သူ့ချစ်သူ တောင်ပေါ်သူ ချင်းမလေးဆီက စာကိုရတော့ ၀မ်းသာအားရဖြစ်ပြီး စာဖောက်ဖတ်စာပေါ့ ။ စာထဲမှာပါတဲ့ စာလုံးပေါင်းသတ်ပုံအမှားတွေ ၊ စကားဝဲတဲ့လေသံအတိုင်းရေးထားတဲ့ စာကိုဖတ်မိပြီး စိတ်ညစ်ညစ်နဲ့ ရယ်ရမလို ၊ ငိုရမလို ဖြစ်သွာလေရဲ့ ။
နောက်ဆုံး ကိုလုံးလည်း အမြင်ကတ်ကတ်နဲ့ သူ့ရေးထားတဲ့ စာကိုပဲ
ပြင်သင့်တာပြင်ပြီး ပြန်စာအဖြစ် အောက်ပါအတိုင်း ပြန်ထည့်ပေးလိုက်တော့တယ် ၊၊
ကိ်ုယ်လုံး.... ( စတာနဲ့ မှားပြီ .. ယပလက်သတ် က မလိုပဲ လျှာရှည်ပြီင်္း ထည့်တယ် )
ကိ်ုယ်လုံးမရှိထဲက မီး အလွမ်းဂျီး လွမ်းခဲ့ရပါတယ် (နင်ကခေါင်းပြတ်နေလို့လား) ။ ကိ်ုယ်လုံးဖာခေါင်းကို ဂျားညှပ်ပြီး (ဖာကိုခေါင်းကြားညှပ်တာ) မျိုသွားပြီဆိုတာ သိတော့ (မြို့ သွားတာပါဟ ... ငါလည်း ဘာအကောင်ကြီးဖြစ်မှန်းမသိ ) မီးလေ ဆိတ်ဆင်းရဲပြီး ဆားမရ ၊ အိမ်မရ ဖြစ်နေတာ ၊၊ ( ဆိတ်တွေရော ၊ ဆားတွေရော ၊ အိမ်တွေရော ရှုပ်နေတာပဲ )
မီးအရင်လိုခြစ်နေတုန်းပါပဲ (ဂတ်စ်လညိး အတော်ကုန်နေလောက်ပြီ ) ၊ ကိ်ုယ်လုံးလဲ မီးမရှိရင် မနေတတ်တာသိတယ် (ဒါကြေင့် မီးမပျက်တဲ့ နိုင်ငံခြားတောင်သွားမလားလို့) ၊၊ မီးကို အရင်တုံးကလိုပဲ ဆွဲလန်နေတုန်းပဲလားဟင် (အမ် [You must be registered and logged in to see this image.]) ၊၊ မီးလည်း တနေ့တနေ့ မြက်ရေနဲ့ မြက်ခွက်ပါပဲ ။
ဒါနဲ့ စဂါးမစပ် ပြီးခဲ့တဲ့လက ဘုရားပွဲလုပ်တယ်လေ ။ အားပါး ..... အရမ်းဆီကားတာပဲ ( ဆိတွေ ဒီမှာဈေးတက်နေလို့ ပို့လိုက်စမ်းပါ ) ၊၊
ကိုယ်လုံးမပါပဲ မီးသွားကြည့်တာ မပျော်ဘူး ဒကယ် (နင်က ခေါင်းချည်းပဲ သွားကြည့်တာကိုး ) ၊၊ မီးမကြည့်ဘူးဒဲ့ စတိတ်ရှိုးဆိုလားဘာဆိုလား လာပြတယ်ကော... ။ မီးက ရှိုးဆို ဖဲရိုက်တာပဲသိတာကိုး (ဒါတော့သိတယ် ) ။
ကျားပေါက်တွေ ၊ ဆင်ပေါက်တွေ ဆိုတော့ မီးက တလိပ်ဆန်တွေ မြက်လှည့် ပြတာလို့ ထင်တာပေါ့ ( မြက်လှည့် ပြတာ တော့ ငါတောင်တတ်တယ် ။ ) ဟိုရောက်တော့ ကျားပေါက်ဆိုတာ လား လား လူကောင်ကြီး ဖြစ်နေတာပေါဝေ့ ။ အဲဒီအကောင်ကလည်း
အတံက ပြဲသကိုးတော်ရေ ( [You must be registered and logged in to see this image.] အသံ .. အသံ ၊ အထင်လွဲစရာတွေ ဖြစ်တော့မယ် ) ၊၊ တို့ရွာက
သုတ်ကြီးဆိုရင် (တုတ်ကြီး ပါဟ) မျိုကြီးဆိုတဲ့ အဆို့တော် အတံကို အားကြလို့ အော်တာ အတံဝင်လို့တဲ့ ( [You must be registered and logged in to see this image.] ) ..... တ အ အား အော်နေတာလေ ( အော် အသံဝင်လို့ အ အ အော်နေတယ်..... ငါနော် [You must be registered and logged in to see this image.] )
နောက်ပြီး ..... မီးဘကြီးအောင်းနေတဲ့ (ဘကြီးအောင် ကို တွင်းအောင်းခိုင်း နေပြန်ပြီ ) ယက်ကွက်က တာဇံလေ (သာဇံပါဟ....
သူကြည့်ဘူးတဲ့ ဗီဒီယိုကားတွေ ပါလာပြန်ပြီ ၊) ဒင်းက အခုမိန်းမရလို့တဲ့တော်ရေ ရှေ့အင်္ဂါဆို သူ့မိန်းမ ကလေးမွေးမယ်တော်ရေ့ ၊၊
နံမယိပေး ကင်ပွန်းချဉ်ချက် လုပ်မလို့ ကျံနေပီလေ ( ကင်ပွန်တပ်တာ .... သူ့အလှည့်မှ ကင်ပွန်းချဉ်ချက်တယ်လို့ပဲ ) ။ စနေမောင်မောင် တို့ ၊ နိုင်းနိုင်းစနေ တို့ ၊ ဖိုးသောက်ကြာ တို့ကိုအားကျလို့တဲ့အေ.... သားလေးမြွေရင် နံမယိမှာ နေ့နံပါအောင် ဖိုအင်္ဂါလို့ ပေးမတဲ့ (ဖိုးအင်္ဂါ လုပ်ပါဟ ၊ အခုမှ ၀တ်စနှစ်လုံးပေါက်က ကျန်ခဲ့ရသလား ၊ တကတဲ ဟိုအကောင်ကလည်း သမီးမွေးရင် မအင်္ဂါလို့ ပေးမလားမသိဘူး ၊ နာမယ်ကို အပေါက်ရှာရှာ .. အဲလေ ပေါက်ပေါက်ရှာရှာ ပေးတယ် ) ။
မီးတို့လည်း အဲလို ဘယ်ဒေါ့ (အယ် ခွေးဖြစ်ပါပြီ ) အတူအတူ နေရမလဲ မသိဘူးနော် ။ ကိုယ်ရယ် ... မီး
အရန်လွမ်းတာပဲ (လွမ်းတာပဲကို အရန်တွေ Line-up တွေလွမ်းချင်နေသေးတယ် ) မီင်္းလည်း မျိုလိုက်ချင်ပေမယ့် (မျိုတာချလိုက်ပေတော့) ၊၊ ဆီပွားရေးက အဆင်မပြေဘူလေး... ၊၊ မီးလည်း ချီးစားနေရတော့ (အေးပါ စား.. စား )
အကြွေးတွေလည် အလီလီ (တစ်ခါတည်းတန်းပြင်ပေးလိုက်တယ် [You must be registered and logged in to see this image.]) ပဲ ။ မျိုသူတွေနဲ့တွေပြီး တောင်းပေါ်က ခြင်မ ကို မေ့မသွားပါနဲ့
(တောင်ပေါ်က ချင်းမကို မမေ့ဘူးဟေ့) ။ ကိုယ်လုံးပျံလာပါနော် ( တောင်ပံပေါက်တဲ့နေ့ထိ စောင့်ပေတော့) ၊၊
မီးဆောင့်နေမယ် ..... မီးဆောင့်ပြီးရင်း ဆောင့်နေမှာပါ ( [You must be registered and logged in to see this image.] )
မီးစာရှည်သွားပီမို့ တော်သေပီ ( မီးစာကုန်ပြီး မီးသေမှပဲ)
ခြစ်တဲ့မီး ( မီးခြစ်ပေါ့)
စပလင်မှားရင် ခွင့်လွတ်ပါ ( စာလုံးပေါင်းသာ မတတ်တယ် ၊
ဘိုလိုမှုတ်ချင်သေးတယ် ၊ နောက်ဆို စပလင်တင်မကဘူး ငရုတ်ကောင်း တွေပါ
Myanmar Online Games Forum :: MMOG Entertainment :: Comedy